Soo iibso budada CDP choline (987-78-0) hplc≥98% | Alaab-bixiyeyaasha AASraw
/ Products / Nootropics budada / CDP budada choline
Rating: SKU: 987-78-0. Category: Nootropics budada
AASraw waxaa la socda awoodda wax soo saarka iyo wax soo saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee budada dufanka CDP (987-78-0), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Fiidiyowga budada ee CDP
Noocyada aasaasiga ah ee CDP-da ee CDP
Name: Daawada budada ee CDP
Qaaciddada Molecular: C14H26N4O11P2
Miisaanka kelli: 488.32
Dhibcaha Biyaha: 172-175 ° C
Daawada budada ah ee CDP si kor loogu qaado shaqada maskaxda iyo kor u qaad dheeraad ah
Magacyada: Daawada budada ee CDP, citicholine, Neurocoline
Isticmaal budada qoyan ee CDP
Caawinaadkan waxaa loo adeegsadaa si looga hortago ama loo daweeyo dhibaatooyinka xasaasiga ah ee la xiriira waayeelka sababtoo ah xaqiiqda ah in labadaba ay labadiinaba qirayaan in ay yihiin kuwo neerfotin ah oo laga yaabo inay kor u qaadaan barashada. Inkastoo ay u muuqato in ay ka waxtar badan tahay fosfatidylcholine (PC) doorashadan, qayb ahaan sababtoo ah kordhinta PC kombiyuutarka ee maskaxda, awooddiisu waxay u eg tahay mid la mid ah tan Alpha-GPC.
CDP-cholin wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo suurtogal ah oo la xidhiidha garashada. Waxaa badanaa loo adeegsadaa sidii kor loogu qaadi lahaa xusuusta dhalinyarada, laakiin inkastoo qaar ka mid ah daraasaadka jiirka ayaa tilmaamaya in tani ay macquul tahay CDP-cholin, ma jirto wax cilmi ah oo bani'aadam ah oo dhalinyaradu waqtigaan ku jiro. Hal daraasad ayaa muujisay kororka dareenka yar ee CDP-cholin (oo loo baahan yahay in la soo celiyo), iyo CDP-choline ayaa yeelan kara kaalmo sida xarun ka hortag ah oo loo isticmaalo kaneecada iyo cadeymaha (caddaynta hordhaca ah).
Sababtoo ah xidhiidhiyaha CDP waa mid si u dulqaadan leh, qiyaaso badan oo qiyaaso ah ayaa la diiwaangeliyay iyada oo aan muuqaalka muuqaalka waxyeellooyinka muhiimka ah. Qiyaasta maalinlaha ah ee meel kasta oo ka timaado 250 ilaa 1000 mg, midkiiba hal mar ama laba xabbo oo 8 ay u kala baxaan saacadaha 12, guud ahaan waxaa loo tixgeliyaa ammaan iyo waxtar.
Waxaa xiiso leh, daraasad MIT ah oo muujinaysa in saameynta qiyaasta 4000 aan la qiyaaseynin kuwa ka duwan kuwa 2000 mg-dose, oo u muuqda inay muujinayso in ay jirto qiimo yar oo qaadashada qadar aad u sarreeya.
Seeraha CDP waxaa laga heli karaa labada koodh iyo foomka budada. Waa biyo laysku daro, iyo inta ugu badan ee 95% qiyaasta afka ah ee jirka lagu nuugo.
Digniin ku saabsan budada qallalan ee CDP
Tijaabooyinka caafimaadka iyo baadhitaanada ayaa tilmaamaya in ilmo-wadaag CDP uusan lahayn waxyeello halis ah, xataa xitaa qiyaasta sare. Tijaabooyinka sunta ah waxay muujiyeen in aysan wax saameyn ah ku yeelanayn nidaamka cholinergic oo ay si fiican u dulqaadan tahay, sifooyinka taasoo u dhiganta inay ku haboon tahay daaweynta cudurada kala duwan, dhaawacyada, iyo xanuunada.
Xummad, madax-xanuun, hurdo-xumo, iyo shuban ayaa si aan caadi ahayn loo soo wargeliyay inay saameyn xun ku yeelan karaan. Daraasado ah oo ku saabsan saameynta haweenka uurka leh waa la dhammeeyaa, sidaas darteed kuwa uurka leh ama naas-nuujinta ayaa lagula talinayaa in ay iska ilaaliyaan isticmaalka qalabka CPD.
Xayeysiis CDP waa ku-soo-koobnaan aad u fiican oo ku habboon wax-kabixinta isticmaale-celiska ee manotropic. Teeda kale, waxa weeye iyada oo la xoojiyay xasuusta xasuusta, oo loo yaqaanno hagaajinta xasuusta iyo ka hortagga lumitaanka xusuusta ee la xidhiidha da ', jirro, iyo dhaawac.
Waxay bixisaa koronto maskaxeed oo kordhay, feejignaan fiican, iyo feker cad. Iyadoo ay la socoto nootropics kale waa awood xoog leh, iyo marka la jeexjeexo cunsurta gaar ahaan waxay abuureysaa saameyn isku dhafan kuwaas oo qaadaya garashada garashada si heer aan buuxin karin xitaa mid kale.
Isbitaalada ayaa la ogaadey oo la bartay sanadihii tobnaad, waxaana la ogaaday in CDP loo arkay inay si aad ah u dulqaadanayso xataa xitaa qiyaasta sare, inkasta oo qiyaasta tallaaladu aanay muhiim ahayn si loo gaaro natiijooyinka ugu wanaagsan. Ma jiraan wax saameyn ah oo dukumiinti ah oo la diiwaangeliyey, waxaana loo ogolaaday daaweynta caafimaadka Yurub iyo Japan.
Istaraatiijiyada CDP waa mid la awoodi karo oo la heli karo, oo leh awood dheeri ah oo korodhsan oo ku xigan dadka isticmaala buitotropic. Haddii aad rabto in aad ka heshid caanaha nootropic, CDP waa qalab ilbixin ah oo isku dayaya.
(1) Miyuu ka shaqeeyaa budada CDP chin?
CDP Choline waxaa lagu qalajiyaa Choline iyo cyndine oo ku jira mindhicirrada, ka dib marka la gooyo Qalabka Blood-Brain waxaa dib loogu habeynayaa CDP Choline kaas oo loo isticmaalo laguna naqshadeeyey duubayaasha Acetylcholine kuwaas oo ku lug leh fikradaha iyo xusuusta. Macaashka ilaalinta neuro ee uu sababo CDP Choline waxaa suurtogal ah inay sababto ilaalinta labada labbis ee Cardiolipin iyo Sphingomyelin. Fikrad kale oo la soo jeediyey ee ficilku waa kicinta kicinta glutathione. CDP Choline ayaa sidoo kale gacan ka geysataa kor u qaadista calaamadaha badan ee soo dhaweeyeyaasha sida acetylcholine, norepinephrine, iyo dopamine.
Waxaa weli jira doorsoomayaal badan inkastoo ay tahay in la eego iyada oo hagaajinta kartida garashada. Natiijo ahaan, way adagtahay in la go'aamiyo sida waxtarka leh ee CDP Choline ay tahay qof gaar ah. Dhammaantood waxay ku soo baxaan baahidooda iyo awoodda garashada ee hadda iyo sidoo kale doorashooyin hab nololeed.
(2) FURSADAHA IYO HUBINTA
Cudurka CDP waa dheellitirnaan xoogan oo loo yaqaan 'nootropic power' taas oo kordhinaysa diidmo kale oo nafaqo la'aan ah isla markaana u shaqeyneysa si uu u kobciyo dhinacyo badan oo ah garashada iyo caafimaadka maskaxda:
• Horumarinta Xusuusta: CDP Choline waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan ee loo yaqaano awoodda lagu hagaajinayo xusuusta iyo ka hortagga xusuusta. Waxaa badanaa la xiriirta da '-da' anti-aging waxaana loo baray sida daaweyn suuragal ah cudurka Alzheimers.
• Korriinka Tamarta Maskaxda: Joogtaynta tamarta maskaxdu waa mid muhiim u ah qof kasta, laga bilaabo ardayda imtixaannada la siiyo ardayda waayeelka ah ee ka cabanaya maskax ahaan hoos ujeeda-hoos udhaca inta badan la xidhiidha da'da. Tijaabooyinka caafimaadku waxay muujiyeen in CDP Choline uu saameyn weyn ku yeesho tamarta maskaxda, sii kordhinta bioenergetics ee hore iyo hoos u dhigidda hoos u dhaca garashada ee la xidhiidha da'da.
• Feejignaanta iyo Feejignaanta wanaagsan: Isuduwaha CDP wuxuu kordhin karaa awoodda uu u leeyahay in uu xoogga saaro mudo dheer oo leh wax yareyn la'aan, muhiim u ah barashada, inuu xirfad cusub barto, ama uu dhamaystiro wax shaqo adag oo maskaxeed. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in tani ay run tahay xitaa haddii xaalad halis ah ay ka mid yihiin istaroogga, dhaawaca maskaxda, iyo cudurka Alzheimers.
• Awoodsiinta iyo Awoodsiinta Qalabka Noocyada kale: Qaar badan oo isticmaalayaasha nootropic ah waxay tixgeliyaan barnaamijka CDP ee qasabka ah marka ay dhisto xayeysiin ama isku-darka wax lagu daray. Meeshaan aad u fiican, waxay si gaar ah ugu fiicantahay jimicsiga "classetam nootropics", taas oo saameynteeda sii xoogaysa isla markaasna ka hortageysa madax-xanuunka yar yar ee mararka qaarkood lala xiriiriyo cunsuriyada. Waxaa la muujiyey in dib loo dhigo bilowga garashada maqnaashaha Alzheimers marka la isku daro budhcad-badeeda.
CDP Choline Root Powder
Isku-duubka CDP oo la kariyey
Suuq-geynta Shirkadda CDP ee Suuq-geynta
Sida loo soo iibsado budada qashinka CDP ee AASraw